धरान खेलकुदको शहर भनेर परिचित छ । तर यही धरानमा खेलकुदको राम्रो पूर्वाधार विकास हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा बाहिर जति चर्चा परिचर्चा भएपनि भित्री रूपमा खेलकुदका पूर्वाधार पर्याप्त हुन नसक्दा खेलकुदले फड्को मार्न नसकेको तीतो यथार्थ छ । मुलतः खेलको विकासका लागि पूर्वाधार नै यसको जग हो । हुन त राष्ट्रिय स्तरमा समेत धरानले खेलाडी जन्माइसकेको छ । तर, पनि खेलकुद क्षेत्रको व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासको कमीले भनेजति खेलकुद क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको गुनासो बढ्ने गरेको छ । अब भने खेल क्षेत्रको विकासका लागि धरानमा रहेका स्कुलहरू आधार बन्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले धरानमा जनप्रतिनिधि मार्फत त्यो पहल शुरु भएको छ । धरान उपमहानगर भित्र रहेका विद्यालयमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारसहितको खेलाडी उत्पादन गर्नतिर जन निर्वाचित प्रतिनिधिले ठोस योजनासहित अघि बढेको छ । त्यसका लागि सुवास राईको संयोजकत्वमा नगर खेलकुद विकास समिती नै गठन गरेको छ । समितिले धरान उपमहानगरको आयोजनामा धरानमा विद्यालय स्तरीय ‘मेयरकप स्कुल ओलम्पिक प्रतियोगिता’ शुरु गरेको छ । कस्तो खालको प्रतियोगिता हो यो ? प्रतियोगिताको सेरोफेरोमा रहेर पहिलो किताबका लागि रणध्वज लोहारले नगर खेलकुद विकास समितिका संयोजक सुवास राईसँग गरेको कुराकानीः–
मेयरकप स्कुल ओलम्पिक प्रतियोगिता के हो ?
निश्चय नै हाम्रो धरान खेलकुदको शहर भनेर पहिचान बनाइसकेको छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू आयोजना भएर सफलतापूर्वक सम्पन्न भैरहेका छन् । धरानले बनाएको यो पहिचानलाई अझै हामी धरानवासीले उँचो राख्दै थप खेल तथा खेलाडी विकासका लागि थप योजना बनाएर काम गर्नु पर्छ भनेर धरान उपमहानगरले नगरको खेलकुद विकासको लागि समिती नै बनाएर काम गर्न थालेको म अवगत गराउन चाहन्छु ।
यसमा खेलसँग सम्बन्धित र धरानवासीले सहयोग गर्नु हुने छ भन्ने अपेक्षा रहेको छ । समितिले पनि धरानमा खेलकुदको विकास गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालालगायत सबैसँग राय सल्लाह लिएर अघि बढ्ने छ । खेलकुदलाई प्रत्येक विद्यालयसम्म पुर्याउने, खेल फर्मको रूपमा विकास गर्ने, अधिकतम् खेल र खेलाडीको प्रवद्र्धन गर्ने, राखेपमा समावेश भएका सबै खेलहरू धरानका विद्यालयमा गराउने र खेलको विकासको लागि थप योजना बनाएर अघि बढ्नु पनि हो । सोहीबमोजिम धरानको खेलकुदको विकासका लागि हामीले धरानमा रहेका विद्यालय–विद्यालय बीच मेयरकप स्कुल ओलम्पिक गराउँदैछौँ । यो गर्नुको उद्देश्य नै अब विद्यालय स्तरबाट नै खेलाडी उत्पादन गर्नु हो अनि खेलकुदको लागि विद्यालय स्तरमा पूर्वाधार तय गर्नु पनि हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा धरानका विद्यालयमा खेलकुदको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो । जहाँ जस्तो छ, त्यसलाई धरान उपमहानगरले थप विकास गरेर लैजाने लक्ष्य लिएको छ । खेलाडी उत्पादन र खेल प्रवद्र्धनका लागि ओलम्पिक ‘माइलस्टोन’ हुने विश्वास लिएका छौँ ।
प्रतियोगिताको तयारी कस्तो रहेको छ ?
तयारीको फाइनल कोर्ट अर्थात अब रिहर्सल गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ । अर्थात् सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । प्रतियोगिताका लागि फुटबल खेल माघ २२ गतेदेखि धरान १७ स्थित एन्फा एकेडमीमा भैरहेको छ । सबैभन्दा धेरै विद्यालयले सहभागिता जनाएको खेल फुटबलमा धरानका निजी तथा सामुदायिक गरी ४५ वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । माघ २८ गते डिपो उच्च माविमा बास्केटबल हुने छ । अनि प्रतियोगिताको उद्घाटन २९ गते धरान १६ स्थित रंगशालामा गर्नेछौँ । दिउँसो १ बजे भव्य रूपमा धरान उपमहानगरका मेयर तारा सुब्बाको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने छ । त्यसमा विद्यालयका खेलाडीले मार्चपास गर्नेछन् । आआफ्नो स्कुलको प्लेकार्ड र झण्डासहित विद्यार्थीहरू मार्च पासमा सहभागी हुनेछन् । त्यसको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी बलको फूल ब्रास व्याण्डले गर्दैछ । आदिवासी जनजातिको १३ वटा झाँकी प्रदर्शन हुनेछन् । ३ वटा खेलहरू (उसु, तेक्वान्दो र कराँते) को प्रदर्शन गरिनेछ । नृत्य र धरानका चर्चित गायकहरूको गायनमा ओलम्पिक गीत प्रस्तुत हुनेछ । मेयर तारा सुब्बाले मेयरकप स्कुल ओलम्पिक २०७४ को शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नु हुनेछ ।
प्रतियोगितामा धरानका कति विद्यालय सहभागी हुनेछन र कुन कुन विधामा हुँदैछ ?
धरानका ५४ वटा विद्यालयहरु सहभागी हुँदैछन् । तर सबै खेलमा ५४ वटा नै सहभागी छैनन् । पहिलो पटक भएकाले यस्तो भएको हो । हाम्रो पहिलो प्रयास हो तर पनि विद्यालय तथा खेलाडी भाइबहिनीहरू उत्साहित छन् । प्रतियोगितामा करिव २ हजार ३ सय विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाउँदैछन् । त्यो सकरात्मक पक्ष नै हो । यो ओलम्पिक खेलाडी उत्पादनसँगै ऐनाको रूपमा आयोजना हुँदैछ । धरानका विद्यालयले खेलकुदलाई कति प्राथमिकता दिएका छन भन्ने कुरा यसै प्रतियोगिताले देखाउने छ । अवस्था के छ भन्ने कुराको पनि मूल्यांकन हुने छ । खेललाई विद्यालयले कति लगानी गरेको छ त ? विद्यालयमा खेलकुदको लागि भनेर छुट्टै शुल्क समेत लिने गरिएको छ, त्यसमा कसले कति पैसा लगानी गरेको छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ । त्यसैगरी खेलकुदमा कमजोर रहेका त्यस्ता विद्यालयलाई खेलकुदको विकासका लागि धरान उपमहानगरले सहयोग गर्नेछ । खेलको प्रवद्र्धन गर्न विद्यालय स्तरबाटै आधार तय गर्दैछौँ । खेलका विधाहरु १० वटा रहेका छन् ।
ओलम्पिकका विजेता र उप बिजेतालाई पुरस्कारको व्यवस्था कस्तो छ ?
विजेता विद्यालयलाई राम्रै पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ । जसको कारणले धरानको खेलकुदमा थप प्रवद्र्धन होस् । त्यसका लागि विजेता स्कुलले नगद १ लाख रुपैयाँ, ट्रफी प्रमाण पत्र, उप विजेताले नगद ६० हजार ट्रफी, प्रमाणपत्र र तेस्रो हुने स्कुलले नगद ४० हजार ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् । विजेता विद्यालय सम्वन्धित विद्यालयको खेलाडीले पाएको मेडलको आधारमा विजेता घोषित हुनेछ ।
पहिलो पटक विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता गराउँदै हुनुहुन्छ, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
निश्चय पनि खेल सम्पन्न गर्न लगानीको कुरा नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि धरान उपमहानगरकै खेलकुद कोषबाट १२ लाख रुपैयाँ प्रतियोगिताको लागि व्यवस्थापन गरेका छौं । जम्मा व्यवस्थापनको लागि १४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । खेलको ‘इन्ट्री फी’ वापत ५० हजार अपेक्षा गरका थियौं तर हाल सम्म ६० हजार जम्मा भइसकेको छ । विद्यालयलाई २ हजार ५ सय इन्ट्री फि तोेकेका छौं । सामुदायिक विद्यालयले इन्ट्री फि उपलव्ध गराउन नसकेपछि निशुल्क नै गरेका छौं । हामीलाई इभेन्ट भरी सहयोगी भुमिका खेल्ने एसीसी धरानले ५१ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराएको छ ।
खेलमा सहभागी हुने निमय के छन त ?
हामीले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै सहभागी गराउँदैछौँ । त्यसका लागि विद्यालयसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । कक्षा १० भन्दामाथिका विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन पाइने छैन । कसैले त्यसो गर्छ भने त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाहीसमेत गर्नेछौँ । कारबाहीस्वरुप जरिमाना ११ हजार रुपैयाँ र ३ वर्षसम्म त्यस्ता विद्यालयलाई निलम्वन गरी सार्वजनिक समेत गरिने छ ।
प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
मुख्यतः खेलकुद सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थित पूर्वाधार नै छैन । स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छ । इभेन्ट गर्न र गराउन धरानमा त्यस्तो भरपर्दो पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । खेलकुदको शहर भन्छौँ तर खै त यहाँ खेलकुदको पूर्वाधार ? सामान्यबाहेक छैन । त्यसैले अब हामी खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधारसहितको काममा लाग्नेछौँ । जसले गर्दा धरान साँच्चै नै खेलकुद शहर भनेर परिचित बनोस् । धरानमा खेलको विकास होस् र गर्नु पर्छ ।